को हुन् एक्कासौं शताब्दिका वास्तविक निरक्षरहरु ? - Khusi Limbu
Home - Blogs - को हुन् एक्कासौं शताब्दिका वास्तविक निरक्षरहरु ?
एक्कासौं शताब्दिका निरक्षरहरु भनेका ति होइनन् जो लेखपढ गर्न सक्दैनन् । निरक्षर ति हुन् जो सिक्न चाहन्दैनन् । वर्तमान शताब्दिका निरक्षरहरु आफ्नो निश्चित परिधिभन्दा बाहिर गएर अरुबाट सिक्न चाहँदैनन् । उनीहरू न त अरुलाई आफ्नो परिधिभित्र आउनदिन्छन् न अरुलाई सिकाउन चाहन्छन् ।
एक्कासौं शताब्दीका निरक्षरहरु सामान्यतया आफ्नो सानो परिधि वरिपरि पर्खाल बनाउन खोज्छन् तर अरुलाई त्यहाँ पुल बनाउन नदिने कुचेष्टा गर्छन् । भएका पुलहरु भत्काउन चाहन्छन् । उनीहरुलाई आफ्नो परिधिभित्रको क्षेत्रफल समुद्र झैं लाग्छ तर परिधिबाहिरको संसारलाई कुवा सम्झेर छलाङ् मार्न चाहंदैनन् ।
अरुलाई सिकाउन केही ज्ञान र अरुबाट सिक्नका लागि केही हदसम्म आत्मविश्वास चाहिन्छ – बढी होइन र कम पनि होइन । यदि कसैलाई कम आत्मविश्वास छ भने उसले सिक्न सक्दैन र चाहिनेभन्दा बढी आत्मविश्वास भयो भने उसलाई लाग्दछ कि उसलाई सबै कुरा थाहा छ र केही सिक्न जरुरी छैन ।
आजको दिन यहाँहरुका लागि शुभ रहोस् ।